Ziziphi iivenkile ezithengisa uBobbi Brown Makeup? - Izinto Zokuthambisa Brands
Ziziphi iivenkile ezithengisa uBobbi Brown Makeup?
Funda uBobbi Brown makeup esisiseko ...
Ukuba ubuzama ukulandelela ezona venkile zithengisa i-makeup kaBobbi Brown, kukho iivenkile ezininzi zesebe ezithwala i-luxe, uphawu oluphezulu. Ukuba akukho venkile kwindawo yakho, iimveliso zinokuthengwa kwi-Intanethi ngewebhu kaBobbi Brown.
Imihla ngemihla engathath 'icala
UBobbi Brown ludidi oluphezulu, uphawu oluphezulu oluphuculweyo olwenziwe ngumzobi odumileyo uBobbi Brown. I-makeup kaBobbi Brown yaziwa ngokulula kokusebenzisa, ukwenza izinto ngendlela eyahlukileyo kunye nemibala etyebileyo enemibala. Abafazi bathontelana kwiikhawuntara zikaBobbi Brown kuba iisheyiti zinxibe kakhulu.
Iifoto zeMveliso yeMac yeMveliso
UBobbi waziwa ngokungathathi cala kwizinto zakhe zokuqokelela, ezinje nge-beige, isanti, i-taupe kunye ne-grey yamehlo kunye ne-nudes, iipinki kunye neepesika zomlomo, kodwa ikwabandakanya iipopu zombala ezinje nge-eggplant kunye ne-turquoise yamehlo kunye namajikijolo atyebileyo kwaye ebomvu kwimilebe.
Inani lesebe kunye nevenkile ezikhethekileyo zithengisa izinto zokuthambisa zikaBobbi Brown ke ukubheja okukhuselekileyo ukucinga ukuba kukho indawo ekufuphi kuwe. Ukufumana eyona ndawo ikufutshane yokuthengisa, jonga Indawo yokufumana indawo kaBobbi Brown .
Iivenkile zesebe zihlala zinendawo yokuthambisa okanye isitudiyo sikaBobbi Brown. Ikhawuntari iyahluka ngokobukhulu ngokuxhomekeke kwimfuno yomgca.
Macy's Ivenkile enkulu yesebe ethengisa uBobbi Brown ngaphakathi kwisebe lezimonyo. Ngokwesiqhelo kuyakubakho ikhawuntara okanye i-alcove enomboniso wezinto zokuthambisa zikaBobbi Brown ezimiselweyo. Ngokuba nkulu ibango lezithambiso zikaBobbi Brown kwindawo ethile, kokukhona indawo yokuthengisa iya kuba nkulu ngaphakathi kweMacy. Ukuba indawo yokuthengisa ikwicala elincinci, ayinakho ukuthwala zonke iimveliso ngaphakathi komgca kaBobbi Brown. Ukuba awuyiboni imveliso ethile, jonga kummeli wentengiso.
UNeiman Marcus yenye ivenkile enkulu yesebe, kodwa ithande ukuba neendawo ezimbalwa kuneMacys ngenxa yivenkile ephezulu. Iivenkile zakwaNeiman Marcus zihlala zifumaneka kwizixeko ezikhulu ezinje ngeNew York, Los Angeles naseChicago. NjengakwiMacys, uNeiman Marcus uyakuba nekhawuntara kaBobbi Brown kwisebe lezimonyo. Ngenxa yokuba eli sebe ligcina abathengi abaphezulu, umboniso uya kuthwala uninzi lweemveliso ngaphakathi komgca kaBobbi Brown.
INkosi kunye noTaylor
INkosi kunye noTaylor ivenkile yesebe ethelekiswa neMacys kuba ikwiidolophu ezininzi kwilizwe liphela kwaye ibonelela abathengi abafanayo. U-Lord & Taylor banokuba nekhawuntara kaBobbi Brown okanye studio alcove eya kwahluka ngobukhulu.
Ezinye iivenkile zesebe ezithengisa umgca wobuso kaBobbi Brown zibandakanya:
Izinto zokuthambisa zikaBobbi Brown ziyafumaneka kubathengisi abakhethekileyo abathengisa ubuhle kunye nezinto zokukhathalela umntu.
ISephora Ivenkile ethandwayo ethengisa ubuhle ethwala izinto zokuthambisa kunye neempawu zokhathalelo lomntu ukusukela kwiimveliso ezifikelelekayo ukuya kwizinto eziphezulu zokugqibela. USephora uphethe izinto ezininzi zikaBobbi Brown kubandakanya isiseko, umgubo, iblush, ilipstick, iipelethi kunye neeseti zebrashi. ISephora lityathanga lesizwe, nangona kunjalo, iivenkile zifumaneka ikakhulu kwizixeko ezikhulu ezinje ngeSixeko saseNew York.
Iindawo ekuyiwa kuzo kwi-Intanethi
Ukuba akukho sebe okanye ivenkile ekhethekileyo kufutshane nawe, okanye ukuba ukhetha ukuthenga ngokuthenga kwi-Intanethi, ungathenga izinto zokuthambisa zikaBobbi Brown kwi-intanethi Indawo yewebhu kaBobbi Brown . Yeyona ndawo ilungileyo yokuthenga izinto kwi-Intanethi kuba ithwala yonke into kumgca weBobbi, kubandakanya iimveliso ezinomda kunye neephalethi. Ukuhanjiswa simahla kungafumaneka, kwaye unokufumana izipho ezincedisayo ngokuthenga.
Zonke ivenkile zesebe eziphethe izinto zokuthambisa zikaBobbi Brown zikwathwele iimveliso kwi-intanethi, nangona ukhetho lunokulinganiselwa ngaphezulu kokufumaneka evenkileni.
USephora uphethe izinto zokuthambisa zikaBobbi Brown kwiwebhusayithi yakhe kwaye unikezela nge-intanethi kuphela kunye nokukhuthazwa kokuhambisa simahla.
Iimveliso zikaBobbi Brown zithengiswa ikakhulu kwiivenkile zesebe nakwiiwebhsayithi zevenkile ezihamba nazo. Ukuba ubona uBobbi Brown ethengisiwe kwenye intle okanye iwebhusayithi yevenkile, vele utyelele iwebhusayithi yeBobbi Brown kwaye uye kwicandelo 'lengxoxo bukhoma' yesiza. Ungaqinisekisa nommeli kaBobbi Brown ukuba ingaba isiza ongene kuso xa uthengile sisithengisi esigunyazisiweyo sikaBobbi Brown ngaphambi kokuba uthenge.
Ukufumana uBobbi Brown Cosmetics
Ngexesha elizayo xa ujonga ukuba zeziphi iivenkile ezithengisa ukwenziwa kukaBobbi Brown, indawo elungileyo ukuqala lisebe lakho elikufutshane okanye ivenkile yobuhle ekhethekileyo. Ukuba akukho mntu ukufuphi kuwe, okanye ukuba ukhetha intuthuzelo yokuthenga ekhaya, jonga iwebhusayithi kaBobbi Brown kuba iya kuba nolona khetho lubanzi lweemveliso.
Ekhethekileyo Okuzenzekelayo Uboya Ulusu Care Product Isitshayina Astrology Umtshato Womtshato Ihambelana Astrological Signs
ubungqina bencwadi yeinshurensi yezempilo
indlela yokufumana ulwazi lomntu siqu malunga nomntu simahla
yenziwe nini imoto yokuqala
Ngaba iilibra kunye nomhlaza ziyavana
indlela yokulahla uqalo eyadini
uyicoca njani i-dvd engazukudlala